“Waxaan rajeynayaa inaan guulo fiican kasoo hoyiyo xilkan la ii magacaabay“ Filsan Cabdullaahi | Berberanews.com
Home WARARKA “Waxaan rajeynayaa inaan guulo fiican kasoo hoyiyo xilkan la ii magacaabay“ Filsan...
“Waxaan rajeynayaa inaan guulo fiican kasoo hoyiyo xilkan la ii magacaabay“ Filsan Cabdullaahi
Xukuumadda Federaalka Itoobiya ayaa Markii ugu horreysay abid lagu soo daray gabar Soomaali ah, taasoo loo magacaabay Wasiirka Arrimaha Haweenka, Dhalinyarada iyo Carruurta.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa xilkaas taariikhiga ah u magacaabay Maareeyaha guud ee warbaahinta Nabad TV, Filsan Cabdullaahi Axmed.
Filsan ayaa in muddo ahba ahayd qof u dooda xuquuqda haweenka iyo Carruurta, waxayna kasoo jeeddaa Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Intii ay ku guda jirtay howlaha la xiriira u doodista xuquuqda dumarka, waxay aasaastay telefishin sidoo kale u ol’oleeya xasiloonida oo ay ku magacowday Nabad TV.
Iyadoo dareenkeeda kala hadleysay BBC-da ayey shegetay in tallaabadan uu qaaday Dr Abiy Axmed ay tahay horumar weyn oo la gaaray.
“Waa guul Soomaalida usoo hooyatay, in gabar Soomaaliyeed wasiir loo magacaabo, tan labaad, muddooyinkii ugu dambeeyayba waxaan aad uga hawgalay Telefishenka Nabad TV, oo inbadan waxaan u istaagay xuquuqda haweenka deegaanka”, ayay tiri Filsan oo wareysi gaar ah siisay BBC-da.
Filsan ayaa sheegtay in sababta ay markii horeba ugu doodeysay Arrimaha Haweenka ay ahayd maadaama aysan Dumarka qeyb ka ahayn siyaasadda.
“Si gaar ah waxaan ugu istaagay haweenka deegaanka, oo aan ka dhex muuqanin xisbiga cusub ee loo dhisay deegaanka Soomaalida, sidoo kalena waxaan ol’ole ugu jiray sidii loo hagaajin lahaa nolosha carruurta”.
Waxay muujisay inay diyaar u tahay sidii ay kaalinta cusub ee la siiyay uga soo bixi lahayd.
“Waxaan rajeynayaa inaan guulo fiican kasoo hoyiyo xilkan la ii magacaabay ee Wasiirka Haweenka, Dhalinyarada iyo Carruurta, haddii Alle Idmo”, ayey tiri.
Go’aanka gabadhan Soomaalida ah loogu daray Golaha Wasiirrada ee Dowladda Federaalka Itoobiya ayaa qeyb ka ah isbadallada waaweyn ee uu la yimid Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed, tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii 2018-kii.
Mr Abiy ayaa hormuud u noqday isbaddal siyaasadeed oo ka curtay Itoobiya, kaasoo saameyn aad u weyn yeeshay.
Tallaabooyinkii ugu waaweynaa ee uu qaaday waxaa ka mid ahaa inuu sii daayay maxaabiistii arrimaha siyaasadda u xirneyd iyo inuu xor ka dhigay warbaahinta.
Aasaaskii Telefishinka Nabad TV
Filsan Cabdullaahi waxaa u suurtagashay inay dalka Itoobiya ka hirgaliso Telefishinkii ugu horreeyay ee madax banannaa oo laga hirgaliyay deegaanka Soomaalida.
Telefishiinka Nabad oo baahintiisa ugu horreeya Af-soomaali ku billaabay wuxuu tabiyaa warar iyo barnaamijyo madadaalo ah, ujeeddadiisa ugu weyna ay tahay inuu shacabka isku soo dhaweeyo.
Howlaha ugu waaweyn ee uu qaban jiray Telefishinkeeda waxaa ka mid ahaa in loo ol’oleeyo nabadda iyo in tooshka lagu ifiyo arrimaha lidka ku ah xasiloonida.
Lahaanshaha sawirkaNABAD TV
Wareysi ay goor sii horreysay siisay BBC-da ayey ku sharraxday ujeeddada ay u aasaastay Nabad Tv.
“Waxyaabaha igu kallifay inaan tallaabadan qaado waxaa ka mid ah deegaankeenna Soomaalida wixii ka dhacay, oo loo wada joogay, sababtoo ah ma jirin meel ay bani’aadanka xorriyad uga hadlaan, gaar ahaan dumarkana aad bay ugu dhibaateysnaayeen oo aysan heysanin meel ay wixii ay qabeen ku sheegan karaan. Marka muhiim bay ahayd inaan TV noocaas ah oo shaqadaas qabta hirgaliyo”, ayey tiri.
Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sidoo kale muddooyinkii dambe laga hirgaliyay isbadallo badan oo furfurnaan ah, wixii ka dambeeyay markii maamulka lagu wareejiyay xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay Mustafe Cumar.
‘Doorka Soomaalida ay ku leedahay siyaasadda dalka Itoobiya’
Image captionFilsan Cabdullaahi Axmed
Filsan waxay aaminsan tahay in Soomaalida dalka Itoobiya doorka ay siyaasadda dalka ku leeyihiin inuu aad u yar yahay.
Waxay horay BBC-da ugu sheegtay iney muwaaddiniinta deegaanka Soomaalida ay takoor kala kulmaan dalka.
“Dad badan oo ku nool deegaanka Soomaalida intooda badan ma aaminsana iney Itoobiyaan yihiin, si marka arrimahaasi wax looga baddalo waa iney dowladda laamaheeda kala duwan ay qaadaan tallaabbooyin wax ku ool ah” ayey tiri.
“Deegaanka Soomaalida wuxuu leeyahay aqoonyahanno deegaanka Soomaalida iyo dalka intiisa kalaba anfacaya. Marka waa in la helaa nidaam dadkaasi u suuragelinaya ka qayb gal ballaadhan u horseedi kara”. ayey tiri Filsan Cabdullaahi Axmed.
Filsan Cabdullaahi Axmed waxay ku dhalatay magaalada Jigjiga oo ay waalliddiinteeda ku noolaayeen, waxayna ku soo barbaartay magaalada Addis Ababa, waxbarashadeeda jaamacadeedna waxay ku qaadatay dalka Ingiriiska.
Previous articleXisbiga kulmiye oo xil-ka-qaadis isku bedelis iyo magacaabis sameeyay
Next article“waxaan lamaane ku ahayn siyaasadda, haddana waxaana ku nahay noolasha“ ilhan Cumar